Yiziphi Amakhompi Okungcebeleka Ewebhizinisi Yezebhizinisi? - I-Semalt Anwer
Izinhlelo ze-web scraping namathuluzi okukhwabanisa kwakhiwe ngokukhethekile ukukhipha ulwazi oluwusizo amasayithi ahlukene. Lawa mathuluzi awusizo kakhulu ekuqaliseni, amabhlogi, ama-freelancers kanye namabhizinisi ezentengiselwano namabhizinisi amakhulu. Bangakwazi ukukhipha noma ukukhipha idatha ngokuzenzakalelayo noma ngokuzenzekela, bathathe ulwazi olusha nolukhona futhi ulondoloze ukuze kufinyeleleke kalula.
I-Bixo yi-web crawling ne-16 (idatha) yokuhlunga idatha - avene cold crem. Kuyindlela enamandla yokuvula amaminithi we-web mining evulekile njengamachungechunge wamapayipi we-cascading futhi eyakha ulwazi olwenziwe ngokwezifiso kuwe, ukuqoqa kusuka emithonjeni eminingi. Ungayisebenzisa ukuze uthole ibhizinisi lakho elincane nelikhulu futhi ulondoloze yonke idatha ewusizo ku-hard drive yakho ngokuchofoza nje.
DEiXTo uyaziwa nangokuthi AEiXTo. Yilinye lamathuluzi wokudonsa kwedatha anamandla kakhulu futhi adumile asekelwe ku-model ye-W3C ye-Document Object ephelele. Ikuvumela ukuthi ukhiphe idatha enembile futhi ungahlela amafayela akho kufomu le-alfabhethi. Kukunika ukufinyelela okulula kokukhethwa kukho okuhlukahlukene. Ngaphandle kwalokho, ungakwazi ukuhlela ukuthi ungayifaka kanjani amawebhusayithi noma kanjani. Igcina isikhathi esiningi, imizamo namandla.
Iphethini ingenye yezinhlelo zokubamba amawebhu kanye nezinhlelo zokuhamba ezihamba phambili. Ngokuyisisekelo imodemu yezimayini ze-web for abasebenzisi be-Python futhi ineamathuluzi ahlobene ne-Wikipedia API, i-Google, i-HTML DOM parser ne-Twitter. Akugcini nje kuphela futhi kukhwabanisa amasayithi akho kodwa futhi isebenza idatha ewusizo futhi ihlela amafayela ngokuvumelana nezidingo zakho.
I-Scrappy iyithuluzi lokuhweba lewebhu lokuhweba eliza nomthombo ovulekile kanye nezinhlaka zokusebenzisana. Kuyasiza ukukhipha idatha kusuka kumawebhusayithi amabili amancane nezinkulu. Abasebenzisi bavele bahlele imithetho yedatha futhi bavumele i-Scrapy ukwenza konke okunye. Kubhalwe ku-Python futhi igijima ku-BSD, Mac, Windows, ne-Linux.
ama-80legs iyinsizakalo yewebhu enamandla futhi edumile ezayo nezinketho ze-Custom Web Crawling kanye nezinye izincazelo ezithile. Ingakwazi ukufaka amakhasi angama-web ayizigidi ezinhlanu ngaphakathi kwehora, futhi iphakheji layo eliyisisekelo linikeza amasevisi wamahhala asekela ngaphezu kwezikhawu eziyi-12,000 ze-URL. Noma kunjalo, i-premium version yayo inhle kakhulu ekusetshenzisweni kwezohwebo futhi ibiza cishe u-$ 40 ngenyanga.